Su'aal: Sida Loo Arko Kalluunka Biyaha Ku Jira - Baaskiil-BikeHike
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Su'aal: Sida Loo Arko Kalluunka Biyaha Ku Jira
Sideed ku aragtaa kalluunka biyaha ku jira?
Muraayadaha aad ku arki karto kalluunka biyaha ku jira?
Sidee ku garanaysaa meesha aad ka kalluumaysanayso?
Halkee lagu arkay kalluunka?
Muraayada midabka ugu fiican biyaha?
Muraayadaha muraayadaha ma u roon yihiin kalluumeysiga?
Muraayadaha kalluumeysiga run ahaantii ma shaqeeyaan?
Sideed u arki kartaa biyaha hoostooda bilaa muraayad?
Muraayadaha kala duwani miyay caawiyaan wax ka dhex arkaan biyaha?
Ma ku quusi ​​kartaa muraayadaha?
Toontu ma soo jiidataa kalluunka?
Xumboyadu miyay ula jeedaan kalluunka?
Waa maxay wakhtiga ugu fiican ee la aadi karo kalluumaysiga?
Kalluunnadu ma seexdaan?
Halkee ayuu kalluunka ugu dhuuntaa badda?
Waa maxay kalluunka ugu weyn ee abid la arko?
Muraayadaha ugu fiican kalluumeysiga?
Muraayadaha GRAY ma u fiican yihiin kalluumeysiga?
Muraayadaha buluugga ah ama cagaarka ah miyay u fiican yihiin kalluumeysiga?
Ka raadi kalluun firfircoon oo ka soo qulqulaya muuqaal kasta oo aan caadi ahayn oo xeebta ah, barar ama soo bixitaan kale oo aad arki karto, sida dhagaxyo taxane ah oo ku soo qulqulaya biyaha. Kalluunku waxa uu ku hayn doonaa wakhtiga caajiska ah ee ka dambeeya caqabadahan oo kale, markaa waxaad ku kalsoonaan kartaa inay halkaas joogaan haddii aad aragto iyaga oo quudinaya iyo haddii kale.
Muraayadaha kala duwani waxay ka caawiyaan yaraynta dhaldhalaalka ay qorraxdu abuurto marka ay biyaha ku dhufato. Marka dhaldhalaalkan meesha laga saaro, waxa ay awood kuu siinaysaa in aad wax ka aragto biyaha. Tani waxay faa'iido weyn u tahay kalluumaysato kasta oo ka kalluumaysta biyaha aan gunta lahayn ee harooyinka ama jecel inay ka kalluumaystaan ​​biyaha qulqulaya ee webiyada iyo durdurrada.
Ka hel cilladaha cidhifyada soo ururiya kalluunka. Eeg cidhifka bar dheer oo ku sii fidaysa harada, halkaas oo ay si lama filaan ah ugu dhacdo biyo qoto dheer. Cidhifka guud ee haramaha ayaa soo jiita kalluunka. Meelaha alwaaxdu ka gudubto ama ay ka abuurmaan daldaloolo yaryar waxay hayn karaan kalluunka.
Kalluunka waxaa laga helaa meel kasta oo biyo ah oo leh cunto ku filan, ogsijiin iyo dabool. Gurigaaga agtiisa waa inuu yaal meel biyo ah oo kalluun ku dhex nool yahay. Laakiin si aad kalluunka u qabato, marka hore waa inaad barataa inaad fahamto halka ay ku dhuumanayaan. Kalluunku ma wada noolaan karaan biyo isku mid ah.
Haddii aad doonaysid in aad biyaha dul saartid maalinta oo dhan, betka kuugu fiican waa muraayadaha cawliga ah ee aan kala sooc lahayn. Muraayada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale ku fiican biyaha buluuga ah ee qoto dheer, xannibaya dhalaalka, oo kuu ogolaanaya inaad si fiican u aragto biyaha.
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa aad ugu fiican kalluumaysatada, maadaama ay ka caawiyaan jarista iftiinka iyagoo ka tarjumaya iftiinka qorraxda, taas oo keenta muuqaal wanaagsan iyo cadaadiska indhaha oo yaraada.
Ookiyaalaha kalluumeysiga ee dabaylaha ah ayaa kaa caawin kara inaad si fiican u ilaaliso indhahaaga. Ookiyaalaha kalluumeysiga ee darafyada leh ayaa xannibi kara ultraviolet-ka qorraxda ama fallaadhaha UV, si aysan waxyeello u gaarsiin indhahaaga. Fallaadhaha UV waxay waxyeeleyn karaan qaybo badan oo isha ah oo ay ku jiraan inay waxyeeleeyaan cornea indhahaaga. Waxay sidoo kale sababaan cataracts, photokeratitis, iyo cilladaha kale ee indhaha.
Haddii aad xidhato okiyaalaha ama xidhiidhka, waxaad rijeetadaada gelin kartaa maaskaro quusitaan. Xiritaan maaskaro quusitaan ayaa aad uga badbaado badan in la arko waxa ku jira biyaha hoostooda marka loo eego indhaha la kala qaado, waxayna u fiican tahay qof kasta oo aan si fiican wax u arki karin muraayada la'aanteed.
Xaqiiqda: Iftiinka qorraxda ee badda (iyo meelaha kale) waa mid aad u kala fogaaday! Intaa waxaa dheer, dhammaan milicsiga walxaha ka sarreeya biyaha ayaa qayb ahaan polaized. Iyada oo muraayadaha muraayadaha indhaha laga saaro baddu waxay u muuqataa mid hufan!.
Quusidda Muraayadaha Muraayadaha (Okiyaalka) Maya kuma samayn kartid quusitaanka muraayadaha. Naqshadeynta muraayadaha indhaha waxay ka dhigan tahay in gacmaha muraayadaha dhegahaaga aysan u oggolaan in marada caagga ah ama silikoonka ee maaskarada quusitaanka ay si sax ah u daboolaan wejigaaga.
Jawaabta oo kooban waa haa, kalluunka sida toon, laakiin waxaa jira wax ka badan. Daraasaduhu waxay muujinayaan in kalluunka qaarkood ay leeyihiin dareen aad u xoog badan oo ur ah. Waxaa la og yahay in awoodda kalluunku uu urkeeda 1,000 jeer ka wanaagsan yahay kan eyga. Kalluumaysatadu waxay toonta u isticmaali jireen sedkooda muddo tobanaan sano ah sababtoo ah waxay leedahay ur aad u xooggan.
Kalluunku wuxuu u baahan yahay ogsijiin si uu u noolaado. Haddii haantaada ay ku raran yihiin kiimikooyin sun ah, sida koloriin iyo ammonia, kalluunku waxa ay helayaan ogsijiin iyaga u gaar ah iyaga oo sabbaynaya dusha oo afuufaya xumbo. Tani waa calaamad muujinaysa in kalluunkaagu uu khatar ku jiro. Marka kalluunkaagu ka qaato ogsijiinta biyaha, waxay sii daayaan kaarboon laba ogsaydh.
Waqtiyada ugu Wanaagsan ee Kalluumeysiga Subaxda Hore. 6:00 subaxnimo ilaa 9:00 subaxnimo subaxii ilaa galabnimo. 9:00 subaxnimo ilaa 1:00 galabnimo galabnimo ilaa maqribnimo. 1:00 duhurnimo ilaa 5:00 galabnimo
Iyadoo kalluunku uusan u seexan si la mid ah sida naasleyda dhulka seexdaan, kalluunka badankiisu wuu nastaa. Cilmi -baaristu waxay muujinaysaa in kalluunku uu yarayn karo dhaqdhaqaaqiisa iyo dheef -shiid kiimikadiisa isagoo ka feejigan khatarta. Qaar ka mid ah kalluunka ayaa meel sabbaba, qaarna waxay isku gooyaan meel ammaan ah oo dhoobada ama shacaalka ah, qaarna xitaa waxay helaan buul ku habboon.
Meelaha xeebaha, ee u dhow xeebta, badda gunteeda ugu hooseysa waxaa ku daboolan ciid laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa inay leedahay qaybo dhagax ah oo bannaan. Kalluunku wuxuu ku nool yahay dhammaan moolka dheer ee biyaha xeebta, laakiin badidoodu waxay ku dhow yihiin hoosta. Kuwo badan ayaa ku quudiya daboolka agtiisa, sida dhagaxa ama reef shacaab ah, halkaas oo ay ku gaadsan karaan ugaadhsiga.
Maxay Tahay Kalluunkii Ugu Weynaa Abid? Marka loo eego diiwaannada IGFA, kalluunka ugu weyn ee abid la qabtay wuxuu ahaa shark weyn oo weyn oo miisaankiisu ahaa 2,664 rodol (1,208.389 kg.). Waxaa lagu qabtay xeebta Ceduna, Australia, 1959, waxay ku qaadatay Alfred Dean oo xanaaqsan 50 daqiiqo oo kaliya inuu ku guuleysto dagaalka ka dhanka ah sharkkan hal tan ah.
Sida aan kor ku sheegnay, muraayadaha naxaasta (brown ama amber) waxay ku habboon yihiin kalluumeysiga aragga. Waxaa jira hal arrin oo kale oo aad tixgeliso, sidoo kale: xaaladaha iftiinka ee kugu xeeran. Haddi aad tahay kalluumaysato aragga iyo haddii kale, haddii ay qarracan tahay, daruuro tahay ama haddii kale "xaalad iftiin yar", markaas waxaad aad ugu faraxsanaan doontaa xidhashada muraayadaha naxaasta ah.
Lenses-cawlan ayaa ugu fiican kalluumeysiga xeebaha halkaasoo qorraxdu kulushahay oo aad u daran tahay sababtoo ah waxay bixiyaan ilaalinta ugu badan. Haddii aad u socoto inaad u furto biyaha oo aad u baahan tahay inaad mudnaanta siiso xannibaadda iftiinka kor u qaadista midabka, cawl waa muraayadda ugu fiican ee kalluumeysiga.
Dhanka xeebaha, muraayadda buluuga ah ayaa ah jidka loo maro. Biyaha macaan iyo xeebaha, muraayada cagaaran iyo naxaasta ayaa ah doorashooyin aad u fiican. Iftiin yar marka waaberiga ama maqribka, muraayada qalinka qorrax ka soo baxa ayaa ku fiican. Muraayadaha cawl ayaa ah doorashada ugu fiican ee hawlaha maalinlaha ah.
Su'aal: Kalluunku ma xidhan karaa muraayadaha indhaha
Su'aal: Maxay Iss u Isticmaalaan Muraayadaha Indhaha Kalluunka
Su'aal: Waa maxay Kalluunka Biyaha Qabow
Waa maxay heerkulka biyaha ee Betta Fish
Maxay Biyuhu U Baahan Yihiin Kalluunka Betta
Maxaa Kalluunku ka boodaa Biyaha
Su'aal: Kalluunku muxuu ku cunaa biyaha dhexdiisa
Su'aal: Maxay Cunaan Kalluunka Biyaha Badda
Waa maxay heerkulka Betta Kalluunka Biyaha
Jawaab degdeg ah: Malaa'ig Kalluun ma Biyo macaan baa mise Kalluun Biyo milix ah
Jawaab deg deg ah: Eeyadu ma isticmaali karaan muraayadaha indhaha ee midabka leh
Muraayadaha Kala-guurka Ma La Isticmaali Karaa Kalluumeysiga
Previous Post: Su'aal: Sidee bay ku diirran tahay in biyuhu u noqdaan kalluunka Betta
Post Next: Jawaab Degdega ah: Ma Biyo Diilay Ok ee Kaluunka Betta